6 Tallaabo Oo Dib U Dhiga Calaamadaha Gabowga Ama Duqnimada - Daryeel Magazine
6 Tallaabo Oo Dib U Dhiga Calaamadaha Gabowga Ama Duqnimada
Da’da ama duqnimada waa heer uu gaaro qofka nool, haddii uuba jaanis u helo inuu sii noolaado muddo, duqnimada calaamadaha ay leedahay waxaa ugu wayn is baddalka muuqaalka jirka qofka.
Qof kasta wuxuu ku dadaalaa inuu la dagaallamo calaamadaha duqnimada, sidoo kale khubaro badan ayaa iyaguna in badan sameeyay cil-baarisyo lagu soo saarayo waxyaabo ka hor tagaya duqnimada, lala dagallamayo laakin qofki nool uu ku qasbanyahay inuu dareemo.
Dadaal badan kaddib khubaro ayaa soo saaray dhowr tallaabo oo qofki qaada ka ilaalinaya inay calaamadaha duqnimada ama gabownimada si dhaqsa ah ugasoo muuqdaan.
Waxaana tallaabadaas kamid ah:
1. Cuntada an dufanka lahayn: Tallabada koowaad ee talooyinkaan ayaa ah inuu qofku qaato cuntada aan lahayn dufanka, khubarada ayaa ku taliyay cuntooyinka dhirta laga sameeyay, taas oo faa’iido way u leh guud ahaan aadanaha.
2. Omega 3: Waxa uuna ku badanyahay kalluunka ama mallayga, waxa uuna saamayn wayn ku yeelanayaa sare u qaadidda heerka dufanka ee dhiigga, jirkana waa u muhiim jirku inuu dufanka qaar, maadaa dufanka caadiga ah loo diiday qofka midkaan ayaa loo ogolyahay.
3. Cabitaanka biyo badan: Dareeha gaar ahaan biyuhu waxay qayb wayn ka qaataan la dagaallanka gabownimada, waxaa daraasada lagu sheegay in maalinti ugu yaraan 2 liter oo biyo ah ay qyb ka tahay caafimaadka jirka iyo ka hor tagga gabownimada.
4. Xanaaq la’aan: Xanaaqa badan wuxuu qayb ka yahay caafimaad darrida, waxayna daraasaddu sheegaysaa in iska yaraynta xanaaqa ay ka hor tagayso duqnimada.
5. Isticmaalka dhirta/khudaarta: Cilmi baarisyo badan ayaa lagu caddeeyay in cudur kasta ee qofka ku dhaca uu jiro dhanka kale geed ama dhir dawo u ah cudurkaas, waxayna culimadu ku taliyeen inuu qofku ku dadaalo isticmaalka dhirta, oo ay qudaartu kamid tahay, sida toonta, spinach-ka kaarootada, mooska qaraha, qajaarka, qumbaha iwm.
6. Socod badan: Gaba gabadii tallaabooyinka dib u dhiga gabownimada waxaa kamid ah socod, waaana inuu qofku socdaa (Lugeeyaa) 15 ilaa 20 daqiiqo maalintiiba, inay dib u dhigayso gabownimada waxaa sii dheer inay xoojiso oo ay fir fircooni siiso murqaha iyo lafaha jirka iyo sidoo kale xoojinta difaaca jirka.
Intaas iyo kuwo kalaba waa talooyin ama tallaabooyin qofki qaadaa uu kaga hor tagi karo gabowga ama duqnimada.
Gabowgu waa xilli ay tahay qofki nool inuu maraa, laakin qof kasta waxay ku dadaashaa inay ka hor tag ballaaran ku wajahdo.
10 Jimicsi Oo Qofka Sameeya Wejigiisa Ka Ilaaliya Coodhcoodhka Iyo Calaamadaha Gabowga Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Dawada Dabiiciga ah ee Agoolka ama Toxobta